Umaka: I-ActiveCampaign | Martech Zone
I-ActiveCampaign: Kungani Ukumaka Kubalulekile Kubhulogi Yakho Uma Kufika Ekuhlanganisweni Kwe-imeyili Ye-RSS
NgoLwesihlanu, ngoJuni 25, i-2021 NgoLwesihlanu, ngoJuni 25, i-2021 Douglas Karr
Isici esisodwa engicabanga ukuthi asisetshenziswa ngokuphelele embonini ye-imeyili ukusetshenziswa kwama-RSS feeds ukukhiqiza okuqukethwe okufanele imikhankaso yakho ye-imeyili. Amapulatifomu amaningi anesici se-RSS lapho kulula kakhulu ukwengeza okuphakelayo kwi-imeyili yakho yezindaba noma omunye umkhankaso owuthumelayo. Ongase ungakuqapheli, noma kunjalo, ukuthi kulula kakhulu ukubeka okuqukethwe okucacisiwe, okumakiwe, kuma-imeyili akho kunokuba kubhalwe ibhulogi yakho yonke
Guqula i-Pro: I-Lead Generation ne-imeyili yokungena kokungena kwe-imeyili kweWordPress
NgoMsombuluko, Okthoba 19, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Njengoba kunikezwe ukubusa kweWordPress njengohlelo lokuphathwa kokuqukethwe, kuyamangaza ukuthi ukunakwa okuncane empeleni kukhokhelwa kanjani kungxenyekazi eyinhloko ekuguqulweni kwangempela. Cishe konke ukushicilelwa - noma ngabe kuyibhizinisi noma ibhulogi yomuntu siqu - kubukeka kuguqula izivakashi zibe ababhalisile noma amathemba. Noma kunjalo, azikho izakhi ngaphakathi kwepulatifomu eyinhloko yokwamukela lo msebenzi. I-Convert Pro iyi-plugin ephelele ye-WordPress enikeza isihleli sokuhudula bese uphonsa, iphendula ngeselula
Okuyimfihlo: Kulula Ukuyisebenzisa, Izici Ezinamandla Zokutholwa KweKhasimende le-On-Site
NgoLwesibili, ngoJuni 25, i-2019 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ethu likuSquarespace, uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe olunikeza zonke izisekelo - kufaka phakathi i-ecommerce. Kumakhasimende azisebenzelayo, kuyipulatifomu enhle enezinketho eziningi. Sivame ukuncoma ukuthi kubanjwe i-WordPress ngenxa yamandla ayo angenamkhawulo nokuguquguquka… kepha kwezinye i-squarespace kuyisinqumo esiqinile. Ngenkathi i-Squarespace ingenayo i-API nezigidi zokuhlanganiswa okukhiqizwayo okulungele ukusebenza, usengathola amanye amathuluzi amahle wokuthuthukisa isayithi lakho. Thina
I-Databox: Landelela Ukusebenza futhi Uthole Imininingwane ku-Real-Time
NgoLwesihlanu, Agasti 10, 2018 ULwesihlanu, May 21, 2021 Douglas Karr
I-Databox yisixazululo sedeshibhodi lapho ungakhetha khona ekuhlanganisweni okwakhiwe kwangaphambili noma usebenzise ama-API nama-SDK awo ukuhlanganisa idatha kalula kuyo yonke imithombo yakho yedatha. IDatabox Designer yabo ayidingi ukufaka ikhodi, ngokuhudula bese uphonsa, ukwenza ngokwezifiso, nokuxhumeka komthombo wedatha elula. Izici zeDatabox Faka: Izaziso - Setha izexwayiso zenqubekela phambili kumamethrikhi asemqoka ngePush, i-imeyili, noma i-Slack. Izifanekiso - IDatabox isivele inamakhulu ezifanekiso akulungele
I-Wishpond: Ukwenza Amagagasi ku-Lead Generation naku-Automation
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2015 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr
Kukhona isivunguvungu emkhathizwe embonini ezisebenzisayo yokumaketha. Izithiyo zokungena kwamapulatifomu amasha ziya ngokuya phansi nangaphansi, amapulatifomu avuthiwe ayagwinywa ngamapulatifomu wokumaketha kwamabhizinisi, futhi lawo asele phakathi aphakathi kolwandle oluthile olunolaka. Kuphakathi kokuthi bayathandaza bangancika kumakhasimende abo ukuze babukeke beheha kumthengi, noma badinga ukwehlisa amanani abo - kakhulu. Isiphazamisi esisodwa embonini lokho